Khabiir Cajiib ah: Wie Man Ghost Empfehlungs Spam In Google Analytics Filtert
Gaadiidku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ololaha internetka oo dhan. Xaalado badan, shabakadaha waxay isku dayayaan in ay koraan iibkooda iyo macaamiishooda iyagoo sii maraya taraafikada sii kordhaya. Siyaabo wadajir ah oo lagu heli karo gaadiidka waxaa ka mid ah SMM iyo Search Engine Optimization (SEO) - best apps website. Kuwaas iyo farsamooyin kale oo badan waxay raadinayaan in ay hagaajiyaan muuqaalka internetka ee goobtaada iyo sidoo kale inay qabtaan hawlo badan oo dib-u-qabasho ah. Xaalado kale, shakhsi ayaa laga yaabaa inay helaan gaadiidka gudbinta oo ah miin dahab. Waxay u samaysaa aasaaska martida kaasoo xiiso u leh dadaalkaaga oo ku dhex yaal niche. Ku soo dhaweynta martida sida macaamiisha waa mid aad u fudud.
Si kastaba ha noqotee, dhammaan xiriiriyayaashu ma aha kuwo sharci ah. Inta badan, xiriirada gudbinta ayaa ka yimaada dadka isticmaala ilaha spam gudbinta. Wuxuu saameeyaa shabakadaha iyo xisaabaadka shaqsiyadeed ee badan. Emaylka spam waxay ka kooban yihiin barnaamijyo waxyeello leh sida nacfiyada iyo Trojans. Xaaladaha qaarkood, waxay ku jiraan xiriiro, kuwaas oo laga yaabo inay ka yimaadaan website-yada khatarta ah ama kuwa xakameynaya.
Nasiib wanaag, falanqaynta Google waxay ogaan karaan oo ay tirtirayaan gaadiidka noocaas ah. Khabiirka Semt Adeegga Dijital, Ross Barber, wuxuu sharxayaa sababta spam u gudbinta sababa qadar tiro badan iyo sidoo kale muddada gaaban iyo sida aad wax uga qaban karto.
Shirkadda baashaalka Google Analytics
Waa tallaabo muhiim ah oo lagu daro filter spam. GA wuxuu awood u leeyahay in uu kala duwo xiriirka dhabta ah ee xiriirka spam. Isticmaalka shaandhooyinka kuwan, GA waxay xiri kartaa dhammaan isku xirka ama gaadiidka ka imaanaya xakameyaal iyo qoryo, ma aha gaadiidka dhabta ah. Waxaa jira siyaabo badan sida qofku u adeegsan karo xawilaad taraafik ah oo loo gudbiyo. Caadi ahaan, dadku waxay eegaan fariinta kuxirta magaca martida. Habkani wuxuu hubiyaa in gaadiidka ku socda websaydhka uu ka yimid magaca martida laakiin aan ahayn ilo kale.
Gudaha maamulka, shaandhadani waxay ka shaqeyn kartaa qaabab kale oo gaar ah. Halkan waxaad ka xakameyn kartaa gaadiidka aad rabto in aad isticmaasho aragtida Google Analytics. Xaaladaha qaarkood, hubi in aad ka baxdo iftiin aan iftiin lahayn ee tabinta admin. Markaad aragto aragti aan filneyn, waxaad hubaal tahay inaadan dhaafin wax macluumaad muhiim ah ama email ah oo ku qoran boggaga internetka kaas oo ku dhaca galka bogga.
Marka aad abuurayso shaashadda, waxaa muhiim ah in lagu daro magacaaga marti-gelintaada iyo agabyada kale ee xogta aad filayso. Qalabkani wuxuu ka dhigi karaa shaandhada u oggolaanaya farriimaha ilo gaar ah, oo si sahlan u eegi kara sida spam. Spam filter ayaa ah mid toos ah oo laga yaabo inaanay u baahneyn wax isbeddel ah markasta oo la sameeyay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la sii wanaajiyo sharraxaadda sifooyinka. Waxaa laga yaabaa inaad raadsato domains kale oo laga yaabo inay lagama maarmaan noqoto in lagu daro liisaskaaga ka saarista goobta.
Kormeeridda gaadiidkaagu wuxuu muhiim u yahay bogga internetka. Shirkadaha intooda badani waxay maalgalinayaan lacago badan oo lacag ah oo ku saabsan kormeerka iyo xakamaynta taraafikada Xaaladaha kale, shirkadahani waxay ka faa'iideystaan ​​sida ay shirkadaha u shaqeeyaan weerarrada spam. Emaarada spam waxay ku jiraan shaqooyin badan oo waxyeello u geysan kara kuwaas oo ka dhigi kara dhinacyada in ay farageliyaan ganacsigaaga ama macluumaadkaaga shakhsiyeed. Waxaad kaftamin kartaa spam u gudbinta boggaaga internetka adiga oo isticmaalaya Google Analytics iyada oo loo marayo hababka kor ku xusan. Nidaamkani wuxuu badbaadin karaa goobahaaga badanaa hoos u dhaca iyo sidoo kale qaar ka mid ah khasaarooyinka, kuwaas oo ku yimaada sababo la xiriira weerarada spam ee guuleysta.